သမိုင်းတကွေ့ကမြန်မာနဲ့စကော့တလန် - MYANMORE+
Home News & Features သမိုင်းတကွေ့ကမြန်မာနဲ့စကော့တလန်
သင်သိပါသလား။ ၀ီစကီ၊ ဂေါက်ရိုက်အားကစား၊ မီးသင်္ဘောနဲ့ ရေနံတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို ၁၉ရာစုနှစ်ကစကော့လူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံဆီယူဆောင်လာတာဆိုတာ။
စကော့လူမျိုးတွေဟာဗြိတိသျှအင်ပါယာမှာကုန်သည်အဖြစ်အသက်မွေးကြပြီး စွန့်စားသွားလာခြင်းကို ၀ါသနာထုံသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ၀ိတိုရီးယားဘုရင်မလက်ထက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုတွေကိုရှောင်ဖို့နဲ့ နယ်ခြားပယ်ခြားမှာအခွင့်အလမ်းသစ်တွေရှာဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆီရောက်လာကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ဒေသလေးတခုကနေ ၂၀ရာစုနှစ်အစောပိုင်းကာလရဲ့ စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်လာခြင်းမှာ စကော့လူမျိုးစစ်သည်တော်၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးသမားတွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း (Source: goasian.com)
စကော့လူမျိုးတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ ပရိုတက်စတင့်ဝါဒ၊ ၀ီစကီသောက်တဲ့အလေ့အကျင့်နဲ့ ဂေါက်ရိုက်အားကစားနည်းတွေပါ မြန်မာနိုင်ငံဆီရောက်လာခဲ့တယ်။ ၁၈၉၃ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဂေါက်ကွင်းတခုစတင်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီကွင်းဟာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။
၁၈၈၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်က စကော့အမျိုးသား James George Scott ကမြန်မာနိုင်ငံကို ဘောလုံးအားကစားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၃၉ခုနှစ်မှာမော်လမြိုင်ကို စကော့အမျိုးသားကုမ္ပဏီ D. Shaw and Co. ရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် supplier အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ မြန်မာနဲ့စကော့တလန်အဆက်အဆံရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
၁၈၅၂-၅၃ အတွင်းဒုတိယအင်္ဂလိပ်-ဗမာစစ်ပွဲပြီးနောက် ဗမာပြည်အောက်ပိုင်းဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်သွားပါတယ်။ စကော့လူမျိုးအင်ဂျင်နီယာ Alexander Fraser ဟာ ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းတွေကို ပုံစံချခဲ့ပြီးကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဗဟိုချက်မအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရန်ကုန်ရဲ့ကုန်သည်များအသင်းမှာ စကော့စီးပွားရေးသမားတွေနေရာယူလာခဲ့ပါတယ်။
ဗမာဘုရင်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကင်းဝင်မင်းကြီးဦးကောင်းဟာ ၁၈၇၁ခုနှစ်ကဥရောပကို အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူဟာ Glasgow ကုန်သည်ကြီးများအသင်းချုပ်ဆီ သွားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက Glasgow ကအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများ ရန်ကုန်အသင်းချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Glasgow က Burmah Oil ရုံး (Source – RCAHMS)
ဒါပေမယ့် ဦးကောင်းရဲ့သံတမန်စွမ်းရည်ဟာ ဗမာနိုင်ငံကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ တတိယအင်္ဂလိပ်-ဗမာစစ်ပွဲအပြီး ၁၈၈၅ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံး အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်သွားပါတယ်။ စကော့ကုမ္ပဏီ Bombay-Burmah Trading Corporation နဲ့ဗမာဘုရင်တို့ကြားဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခကို အကြောင်းပြုပြီး ဗြိတိသျှတွေဟာဗမာနိုင်ငံကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်။
ဗြိတိသျှလက်အောက်မှာရန်ကုန်ဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မှာစကော့လူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလူတွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Findlay မိသားစုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က Irrawaddy Flotilla Co. (IFC) ကိုတည်ထောင်ပြီး ရေနွေးငွေ့သုံးသင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတလျှောက်ရေလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
IFC ရဲ့သင်္ဘောအစိတ်အပိုင်းတွေကို Glasgow က Clyde မြစ်ကမ်းဘေးသင်္ဘောကျင်းမှာပြုလုပ်ပြီး ရန်ကုန်ကိုအစိတ်အပိုင်းတခုစီတင်ပို့တယ်။ ဒီရောက်တော့မှပြန်လည်တပ်ဆင်ကြတာပါ။ IFC ဟာရေယာဉ် ၆၀၀ကျော်ပြေးဆွဲနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသတလျှောက်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ဇောက်တိမ်သင်္ဘောတွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုခဲ့တယ်။
ဗမာ့သယံဇာတတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်စပါး၊ ရေနံ၊ ကျွန်းသစ်တွေကိုလည်းစကော့တလန်ဆီ တင်ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ စကော့လူမျိုးဆန်လုပ်ငန်းရှင် Bulloch Bros. ဟာ Glasgow က Cowie Bros. ကုမ္ပဏီထုတ်ရေနွေးငွေ့သုံးကြိတ်စက်တွေနဲ့ဆန်ထုတ်လုပ်တယ်။ သူတို့သုံးခဲ့တဲ့စက်တွေကို အခုအချိန်ထိမြန်မာ့ကျေးလတ်ဒေသတချို့မှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
Burmah Oil Co. ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့စကော့လုပ်ငန်းတခုပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ British Petroleum လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာကိုမြန်မာပန်းချီဆရာဦးဘဥာဏ်ရေးဆွဲပြီး ရန်ကုန်သင်္ဘောဆိပ်ပုံကိုပြထားတာတွေ့ရတယ်။ ခြင်္သေ့ပုံအမှတ်တံဆိပ်သုံးခဲ့ပါသေးတယ်။
Burmah Oil Company အဆောက်အအုံ (Source: Yangon Architecture Guide)
၁၉၂၀၀န်းကျင်မှာ ဗမာနဲ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးမြင့်မားလာပါတယ်။ Bibby နဲ့ Henderson သင်္ဘောကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်တွေအရ ရန်ကုန်နဲ့ Glasgow၊ Liverpool တို့ကြားအသွားအလာများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် မီးပြတိုက်တွေတခုပြီးတခုထွက်လာခဲ့ပြီး ဒီမီးပြတိုက်တွေတည်ဆောက်ပုံဟာလည်း စကော့တလန် အရှေ့မြောက်ကမ်းရိုးတန်းကပုံစံနဲ့ အတော်လေးတူညီတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အကြီးဆုံးမီးပြတိုက်ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်က Alguada Reef မှာအခုထိရှိနေဆဲပါ။
ဗမာတနိုင်ငံလုံးရထားလမ်းတွေလည်းအများအပြားပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး မြင်းကောင်ရေစွမ်းအင်မြင့်မားတဲ့ မီးရထားအင်ဂျင်တွေလည်းထွန်းကားလာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်ဒေသကမတ်စောက်တဲ့တောင်တန်းတွေအထိပါမီးရထားတွေမောင်းနှင်နိုင်လာပါတယ်။ ဒီရထားတွေကို Glasgow မှာရှိတဲ့ Dunn and Co ကတည်ဆောက်ပြီး ဗမာနိုင်ငံတင်ပို့တယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ ရထားလမ်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် အရှည် မိုင် ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
ဗမာနိုင်ငံကနေ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေထုတ်ယူပြီး ဥရောပကိုတင်ပို့ခဲ့သလို ဥရောပကဈေးသက်သာတဲ့ ကုန်ချောပစ္စည်းတွေကိုလည်းဗမာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ Glasgow က Bell’s Pottery ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ပန်းအိုးတွေကိုအာရှအငွေ့အသက်ပါအောင် နဂါးပုံ၊ စေတီပုထိုးပုံ၊ ဆင်ပုံတွေဆွဲပြီး တင်ပို့ခဲ့တယ်။
Burmah Oil ရဲ့ဌာနချုပ်ကို Glasgow ကနေ England ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါ အဆောက်အအုံသစ်ရှေ့မှာ ဗမာ့ခြင်္သေ့ကြီးတွေထွင်းထုခဲ့ပါတယ်။
စကော့တလန်ကအဖိုးနှုန်းချိုသာတဲ့ချည်ထည်တွေဟာ ဗမာ့စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုအများဆုံးပါပဲ။ ၁၉၃၀လောက်ရောက်တဲ့အခါပြည်တွင်းရက်ကန်းထည်လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားအ၀တ်အထည်တွေကိုစတင်သပိတ်မှောက်ရာကနေ ၁၉၂၀လောက်မှာ ဗြိတိသျှ (နဲ့စကော့) လူမျိုးတွေကို တော်လှန်ရေးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Glasgow နဲ့ ရန်ကုန်ဟာအသွင်အပြင်အားဖြင့်တော်တော်လေးဆင်တူနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်အခါကစကော့ကုမ္ပဏီတွေဟာ Glasgow နဲ့ ရန်ကုန်မှာရုံးခန်းတွေပြိုင်တူဖွင့်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ဗိသုကာဆရာတွေကလည်းရုံးခန်း ၂ခုလုံး တပြိုင်နက်တည်ဆောက်ရလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ စကော့လူမျိုးဗိသုကာဆရာ John Begg (၁၈၆၆-၁၉၃၇) ဆိုရင် စကော့တလန်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ရန်ကုန်တို့မှာအဆောက်အအုံတော်တော်များများဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ရာတွေထဲမှာ ကမ်းနားလမ်းပေါ်က Customs House (အခွန်ရုံး)၊ ပန်းဆိုးတန်းပေါ်က Central Telegraph Office (ဗဟိုကြေးနန်းရုံး)၊ သိမ်ဖြူလမ်းပေါ်က Printing and Publishing Enterprise (ပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံ) တို့ပါဝင်တယ်။ အဆောက်အအုံတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ တံခါးလက်ကိုင်၊ ဓာတ်လှေကား၊ သံတိုင်နဲ့ သံပေါင်တွေကအစ Lanarkshire ကသံရည်ကျိုစက်ရုံတွေထဲမှာသွန်းလုပ်ပါတယ်။
John Begg ဟာအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အတိုင်ပင်ခံဗိသုကာဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀ရာစုရောက်တဲ့အခါမှာ ဗမာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စကော့တလန်မှာပညာတော်သင်သွားခြင်း ခေတ်စားလာခဲ့တယ်။ ၁၉၁၃-၁၄ခုနှစ်မှာ မောင်စိုးမင်းနဲ့မောင်ကျော်ထင်တို့ဟာ University of Glasgow မှာဆေးပညာနဲ့ ရုက္ခဗေဒပညာသင်ကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားတဲ့ဗမာကျောင်းသားတွေထဲမှာ အစောဆုံးပါပဲ။ University of Edinburgh မှာ မြန်မာလူမျိုး ဒေါက်တာဘခင်ဟာဆေးပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၂၀မှာ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ကျူးကျော်မှုနဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့ကြောင့် စကော့လူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးအရှိန်လျော့သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်စစ်အတွင်းကဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့စကော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ စစ်အပြီးမှာလျော်ကြေးရခဲ့ပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးဗမာပြည်မှာတော့ပျက်စီးမှုတွေကျန်ရှိနေဆဲပါ။
စကော့လူမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ကတော့ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆေးခန်းသွားတဲ့အခါဆရာဝန်တယောက်ယောက်ရဲ့နာမည်အောက်မှာ M.Sc. Edinburgh ဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့နေရဆဲပါ။ Scots Kirk ဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်း၊ Glan Master ၀ီစကီကြော်ငြာ၊ စကော့လူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်စုံ tartan အဆင်နဲ့တူတဲ့လုံချည်ဆင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်းယားကန်အောက်မှာ Loch Ness သတ္တ၀ါကြီးတောင်ရှိနေမလား။
Myanmore Magazine က Christian Gilberti ရဲ့ Did you know that Myanmar and Scotland haveashared history? ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသိပါသလား။ ဝီစကီ၊ ဂေါကျရိုကျအားကစား၊ မီးသင်ျဘောနဲ့ ရနေံတူးဖျောခွငျးလုပျငနျးတှကေို ၁၉ရာစုနှဈကစကော့လူမြိုးတှမွေနျမာနိုငျငံဆီယူဆောငျလာတာဆိုတာ။
စကော့လူမြိုးတှဟောဗွိတိသြှအငျပါယာမှာကုနျသညျအဖွဈအသကျမှေးကွပွီး စှနျ့စားသှားလာခွငျးကို ဝါသနာထုံသူတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဝိတိုရီးယားဘုရငျမလကျထကျဗွိတိနျနိုငျငံရဲ့ တငျးကပျြတဲ့အဆငျ့အတနျးခှဲခွားမှုတှကေိုရှောငျဖို့နဲ့ နယျခွားပယျခွားမှာအခှငျ့အလမျးသဈတှရှောဖို့ မွနျမာနိုငျငံဆီရောကျလာကွတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့အစှနျအဖြားမှာရှိတဲ့ဒသေလေးတခုကနေ ၂၀ရာစုနှဈအစောပိုငျးကာလရဲ့ စီးပှားရေးအခကျြအခြာဖွဈလာခွငျးမှာ စကော့လူမြိုးစဈသညျတျော၊ အစိုးရဝနျထမျးနဲ့ စှနျ့ဦးတီထှငျစီးပှားရေးသမားတှကေအရေးကွီးတဲ့အခနျးကဏ်ဍကပါဝငျပါတယျ။
စကော့လူမြိုးတှနေဲ့အတူသူတို့ရဲ့ ပရိုတကျစတငျ့ဝါဒ၊ ဝီစကီသောကျတဲ့အလအေ့ကငျြ့နဲ့ ဂေါကျရိုကျအားကစားနညျးတှပေါ မွနျမာနိုငျငံဆီရောကျလာခဲ့တယျ။ ၁၈၉၃ခုနှဈက ရနျကုနျမွို့မှာ ဂေါကျကှငျးတခုစတငျပျေါလာခဲ့ပွီး အခုခတျေမှာတော့အဲ့ဒီကှငျးဟာ ပွညျသူ့ရငျပွငျဆိုပွီးဖွဈလာတာပါ။
၁၈၈၀ခုနှဈဝနျးကငျြက စကော့အမြိုးသား James George Scott ကမွနျမာနိုငျငံကို ဘောလုံးအားကစားနဲ့မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။ ၁၈၃၉ခုနှဈမှာမျောလမွိုငျကို စကော့အမြိုးသားကုမ်ပဏီ D. Shaw and Co. ရောကျရှိလာပွီး ကြှနျးသဈထုတျလုပျရေးလုပျငနျးအတှကျ supplier အဖွဈလုပျကိုငျခဲ့တဲ့အခြိနျကစလို့ မွနျမာနဲ့စကော့တလနျအဆကျအဆံရှိခဲ့တယျလို့ဆိုရမှာပါ။
၁၈၅၂-၅၃ အတှငျးဒုတိယအင်ျဂလိပျ-ဗမာစဈပှဲပွီးနောကျ ဗမာပွညျအောကျပိုငျးဗွိတိသြှလကျအောကျ ကရြောကျသှားပါတယျ။ စကော့လူမြိုးအငျဂငျြနီယာ Alexander Fraser ဟာ ရနျကုနျရဲ့လမျးတှကေို ပုံစံခခြဲ့ပွီးကိုလိုနီအုပျခြုပျရေးရဲ့ဗဟိုခကျြမအဖွဈအကောငျအထညျဖျောခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ရနျကုနျရဲ့ကုနျသညျမြားအသငျးမှာ စကော့စီးပှားရေးသမားတှနေရောယူလာခဲ့ပါတယျ။
ဗမာဘုရငျရဲ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ကငျးဝငျမငျးကွီးဦးကောငျးဟာ ၁၈၇၁ခုနှဈကဥရောပကို အလညျအပတျရောကျခဲ့တယျ။ သူဟာ Glasgow ကုနျသညျကွီးမြားအသငျးခြုပျဆီ သှားလညျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျကတညျးက Glasgow ကအဖှဲ့ဝငျတျောတျောမြားမြား ရနျကုနျအသငျးခြုပျမှာတာဝနျထမျးဆောငျလကျြရှိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဦးကောငျးရဲ့သံတမနျစှမျးရညျဟာ ဗမာနိုငျငံကိုကယျတငျနိုငျစှမျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ တတိယအင်ျဂလိပျ-ဗမာစဈပှဲအပွီး ၁၈၈၅ခုနှဈမှာတနိုငျငံလုံး အင်ျဂလိပျလကျအောကျရောကျသှားပါတယျ။ စကော့ကုမ်ပဏီ Bombay-Burmah Trading Corporation နဲ့ဗမာဘုရငျတို့ကွားဖွဈတဲ့ပဋိပက်ခကို အကွောငျးပွုပွီး ဗွိတိသြှတှဟောဗမာနိုငျငံကိုသိမျးယူခဲ့တယျ။
ဗွိတိသြှလကျအောကျမှာရနျကုနျဟာအရှိနျအဟုနျနဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခဲ့ပွီး ရနျကုနျမှာစကော့လူမြိုးလုပျငနျးရှငျအမြားအပွားလာရောကျရငျးနှီးမွှုပျနှံခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီလူတှထေဲမှာ နာမညျအကွီးဆုံးကတော့ Findlay မိသားစုဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သူတို့က Irrawaddy Flotilla Co. (IFC) ကိုတညျထောငျပွီး ရနှေေးငှသေုံ့းသင်ျဘောတှနေဲ့မွနျမာနိုငျငံတလြှောကျရလေမျးပို့ဆောငျရေးစနဈကို စတငျခဲ့ပါတယျ။
IFC ရဲ့သင်ျဘောအစိတျအပိုငျးတှကေို Glasgow က Clyde မွဈကမျးဘေးသင်ျဘောကငျြးမှာပွုလုပျပွီး ရနျကုနျကိုအစိတျအပိုငျးတခုစီတငျပို့တယျ။ ဒီရောကျတော့မှပွနျလညျတပျဆငျကွတာပါ။ IFC ဟာရယောဉျ ၆၀၀ကြျောပွေးဆှဲနိုငျတဲ့အထိအောငျမွငျခဲ့ပွီး ဧရာဝတီမွဈဝှမျးဒသေတလြှောကျနဲ့အဆငျပွတေဲ့ ဇောကျတိမျသင်ျဘောတှကေိုအဓိကထားအသုံးပွုခဲ့တယျ။
ဗမာ့သယံဇာတတှဖွေဈတဲ့ ဆနျစပါး၊ ရနေံ၊ ကြှနျးသဈတှကေိုလညျးစကော့တလနျဆီ တငျပို့ခဲ့ကွပါတယျ။ စကော့လူမြိုးဆနျလုပျငနျးရှငျ Bulloch Bros. ဟာ Glasgow က Cowie Bros. ကုမ်ပဏီထုတျရနှေေးငှသေုံ့းကွိတျစကျတှနေဲ့ဆနျထုတျလုပျတယျ။ သူတို့သုံးခဲ့တဲ့စကျတှကေို အခုအခြိနျထိမွနျမာ့ကြေးလတျဒသေတခြို့မှာတှနေို့ငျပါသေးတယျ။
Burmah Oil Co. ကလညျးမွနျမာနိုငျငံရောကျလာတဲ့စကော့လုပျငနျးတခုပါ။ နောကျပိုငျးမှာ British Petroleum လို့အမညျပွောငျးခဲ့တယျ။ သူတို့ရဲ့ကွျောငွာကိုမွနျမာပနျးခြီဆရာဦးဘဉာဏျရေးဆှဲပွီး ရနျကုနျသင်ျဘောဆိပျပုံကိုပွထားတာတှရေ့တယျ။ ခွင်ျသပေုံ့အမှတျတံဆိပျသုံးခဲ့ပါသေးတယျ။
၁၉၂၀၀နျးကငျြမှာ ဗမာနဲ့ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှကွေားဆကျဆံရေးမွငျ့မားလာပါတယျ။ Bibby နဲ့ Henderson သင်ျဘောကုမ်ပဏီရဲ့အခကျြအလကျတှအေရ ရနျကုနျနဲ့ Glasgow၊ Liverpool တို့ကွားအသှားအလာမြားလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတလြှောကျ မီးပွတိုကျတှတေခုပွီးတခုထှကျလာခဲ့ပွီး ဒီမီးပွတိုကျတှတေညျဆောကျပုံဟာလညျး စကော့တလနျ အရှမွေ့ောကျကမျးရိုးတနျးကပုံစံနဲ့ အတျောလေးတူညီတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အကွီးဆုံးမီးပွတိုကျဟာ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောက Alguada Reef မှာအခုထိရှိနဆေဲပါ။
ဗမာတနိုငျငံလုံးရထားလမျးတှလေညျးအမြားအပွားပျေါထှကျလာခဲ့ပွီး မွငျးကောငျရစှေမျးအငျမွငျ့မားတဲ့ မီးရထားအငျဂငျြတှလေညျးထှနျးကားလာခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ရှမျးကုနျးမွမွေငျ့ဒသေကမတျစောကျတဲ့တောငျတနျးတှအေထိပါမီးရထားတှမေောငျးနှငျနိုငျလာပါတယျ။ ဒီရထားတှကေို Glasgow မှာရှိတဲ့ Dunn and Co ကတညျဆောကျပွီး ဗမာနိုငျငံတငျပို့တယျ။ နိုငျငံတှငျးမှာ ရထားလမျးတှအေားလုံးပေါငျးလိုကျရငျ အရှညျ မိုငျ ၂၀၀၀ ကြျောရှိပါတယျ။
ဗမာနိုငျငံကနေ ကုနျကွမျးပစ်စညျးတှထေုတျယူပွီး ဥရောပကိုတငျပို့ခဲ့သလို ဥရောပကဈေးသကျသာတဲ့ ကုနျခြောပစ်စညျးတှကေိုလညျးဗမာနိုငျငံကိုတငျသှငျးခဲ့ပါတယျ။ Glasgow က Bell’s Pottery ဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ပနျးအိုးတှကေိုအာရှအငှအေ့သကျပါအောငျ နဂါးပုံ၊ စတေီပုထိုးပုံ၊ ဆငျပုံတှဆှေဲပွီး တငျပို့ခဲ့တယျ။
စကော့တလနျကအဖိုးနှုနျးခြိုသာတဲ့ခညျြထညျတှဟော ဗမာ့စီးပှားရေးအပျေါ သကျရောကျမှုအမြားဆုံးပါပဲ။ ၁၉၃၀လောကျရောကျတဲ့အခါပွညျတှငျးရကျကနျးထညျလုပျငနျး အားလုံးနီးပါးပြောကျကှယျလုမတတျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့နိုငျငံခွားအဝတျအထညျတှကေိုစတငျသပိတျမှောကျရာကနေ ၁၉၂၀လောကျမှာ ဗွိတိသြှ (နဲ့စကော့) လူမြိုးတှကေို တျောလှနျရေးစတငျဖွဈပှားလာခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ Glasgow နဲ့ ရနျကုနျဟာအသှငျအပွငျအားဖွငျ့တျောတျောလေးဆငျတူနခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီခတျေအခါကစကော့ကုမ်ပဏီတှဟော Glasgow နဲ့ ရနျကုနျမှာရုံးခနျးတှပွေိုငျတူဖှငျ့လရှေိ့တဲ့အတှကျ ဗိသုကာဆရာတှကေလညျးရုံးခနျး ၂ခုလုံး တပွိုငျနကျတညျဆောကျရလရှေိ့ပါတယျ။
ဥပမာ စကော့လူမြိုးဗိသုကာဆရာ John Begg (၁၈၆၆-၁၉၃၇) ဆိုရငျ စကော့တလနျ၊ အိန်ဒိယနဲ့ ရနျကုနျတို့မှာအဆောကျအအုံတျောတျောမြားမြားဒီဇိုငျးဆှဲတညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ သူ့လကျရာတှထေဲမှာ ကမျးနားလမျးပျေါက Customs House (အခှနျရုံး)၊ ပနျးဆိုးတနျးပျေါက Central Telegraph Office (ဗဟိုကွေးနနျးရုံး)၊ သိမျဖွူလမျးပျေါက Printing and Publishing Enterprise (ပုံနှိပျနဲ့ထုတျဝရေေးလုပျငနျးအဆောကျအအုံ) တို့ပါဝငျတယျ။ အဆောကျအအုံတှအေတှကျလိုအပျတဲ့ တံခါးလကျကိုငျ၊ ဓာတျလှကေား၊ သံတိုငျနဲ့ သံပေါငျတှကေအစ Lanarkshire ကသံရညျကြိုစကျရုံတှထေဲမှာသှနျးလုပျပါတယျ။
၂၀ရာစုရောကျတဲ့အခါမှာ ဗမာကြောငျးသားတှအေနနေဲ့စကော့တလနျမှာပညာတျောသငျသှားခွငျး ခတျေစားလာခဲ့တယျ။ ၁၉၁၃-၁၄ခုနှဈမှာ မောငျစိုးမငျးနဲ့မောငျကြျောထငျတို့ဟာ University of Glasgow မှာဆေးပညာနဲ့ ရုက်ခဗဒေပညာသငျကွားပွီး မွနျမာနိုငျငံကိုပွနျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကနိုငျငံခွားပညာတျောသငျသှားတဲ့ဗမာကြောငျးသားတှထေဲမှာ အစောဆုံးပါပဲ။ University of Edinburgh မှာ မွနျမာလူမြိုး ဒေါကျတာဘခငျဟာဆေးပညာသငျယူခဲ့ပွီး ၁၉၂၀မှာ ဘှဲ့ရခဲ့ပါတယျ။
ဂပြနျကြူးကြျောမှုနဲ့ ဒုတိယကမ်ဘာစဈတို့ကွောငျ့ စကော့လူမြိုးတှရေဲ့စီးပှားရေးအရှိနျလြော့သှားခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့စဈအတှငျးကဆုံးရှုံးမှုတှကွေုံခဲ့ရတဲ့စကော့လုပျငနျးရှငျတှဟော စဈအပွီးမှာလြျောကွေးရခဲ့ပမေယျ့ လှတျလပျရေးရပွီးဗမာပွညျမှာတော့ပကျြစီးမှုတှကေနျြရှိနဆေဲပါ။
စကော့လူမြိုးတှနေဲ့အဆကျအသှယျကတော့ပွတျတောကျသှားခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆေးခနျးသှားတဲ့အခါဆရာဝနျတယောကျယောကျရဲ့နာမညျအောကျမှာ M.Sc. Edinburgh ဆိုတဲ့စာတနျးကိုတှနေ့ရေဆဲပါ။ Scots Kirk ဆိုတဲ့ဘုရားကြောငျး၊ Glan Master ဝီစကီကွျောငွာ၊ စကော့လူမြိုးတှရေဲ့ဝတျစုံ tartan အဆငျနဲ့တူတဲ့လုံခညျြဆငျတှဟော မွနျမာနိုငျငံမှာရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ အငျးယားကနျအောကျမှာ Loch Ness သတ်တဝါကွီးတောငျရှိနမေလား။
Myanmore Magazine က Christian Gilberti ရဲ့ Did you know that Myanmar and Scotland haveashared history? ကိုမွနျမာဘာသာပွနျဆိုဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။
Next articleEvents & Promotions Guide